मेरो पीसी जलाने को पहिचान गर्दैन: समाधान खोज | मोबाइल फोरम
डेनियल टेरासा | 27/09/2021 15:00 | इन्टरनेट
सबैको लागि प्रशंसक पढ्दै संसारभरि दलाल एक अविभाज्य मित्र बनेको छ। ग्रह मा सबैभन्दा लोकप्रिय ई-पुस्तक पाठक मनोरन्जन, संस्कृति र शिक्षा को धेरै घण्टा संग हामीलाई प्रदान गरेको छ। यद्यपि पनी केहि अन्य समस्या, जस्तै जब हामी पाउँछौं कि हाम्रो पीसी Kindle पहिचान गर्दैन।
२०० 2007 मा यसको सुरुवात पछि, अमेजन Kindle यो अनुयायीहरु प्राप्त गर्न र प्रत्येक अपडेट पछि सुधार थप्न बन्द गरीएको छैन। नवीनतम संस्करण, २०१ in मा प्रस्तुत, को हो किन्डल ओएसिस २०१ 3। अन्य नवीनताहरु को बीच, यो मोडेल वालपेपर मा तातो प्रकाश को शामिल गर्न को लागी पहिलो हो। एक राम्रो तरीका पढ्न सजिलो र आँखा मा सजिलो बनाउन को लागी।
त्यहाँ धेरै कारणहरु छन् कि समय समयमा समय को लागी तपाइँ एक लाई जोड्नु पर्छ ई-पाठक कम्प्युटरमा। उदाहरण को लागी, पाठक मा नयाँ किताबहरु राख्न। सामान्यतया, यो कार्य प्रदर्शन गर्न को लागी तपाइँ पुस्तकहरु लाई रूपान्तरण गर्न को लागी छ .mobi ढाँचा, जुन किन्डल द्वारा प्रयोग गरीएको हो। यो रूपान्तरण को रूप मा केहि कार्यक्रमहरु लाई धन्यवाद को लागी गरीन्छ कैलिबर र अन्य। र यसलाई चलाउन को लागी हामीलाई एक कम्प्यूटर को आवश्यकता छ।
यस कारण को लागी, यदि पीसी Kindle पहिचान गर्दैन, हामी एक धेरै कष्टप्रद समस्या छ। के तपाइँ ती किताबहरु कि तपाइँ तपाइँको कम्प्युटर मा राख्न को लागी पढ्न को लागी सक्षम नहुने गरी आफैंलाई राजीनामा दिनु पर्छ? कुनै हालतमा हुदैन। त्यहाँ समाधान छन् र हामी उनीहरुलाई यो पोष्ट मा तपाइँलाई व्याख्या गर्नेछौं।
1 पीसी जलाने जडान समस्याहरु:6समाधान
1.1 फरक USB पोर्ट कोसिस गर्नुहोस्
1.2 स्थापना रद्द गर्नुहोस् र USB नियन्त्रण पुन: स्थापना गर्नुहोस्
1.3 USB चुनिंदा निलम्बन अक्षम गर्नुहोस्
1.4 Kindle को पूर्ण रिसेट
1.5 क्यामेराको रूपमा जडान गर्नुहोस्
1.6 कम्प्यूटर मा Kindle चालक स्थापना गर्नुहोस्
पीसी जलाने जडान समस्याहरु:6समाधान
सामान्य परिस्थितिमा, जब हामी कम्प्यूटरमा हाम्रो किन्डल जडान, USB ड्राइभ मोड प्रतिमा ई-पाठक स्क्रिनमा देखा पर्दछ। एकै समयमा, यस बीच, पीसी स्क्रीन मा यसको आन्तरिक मेमोरी बाट फाइल एक्सप्लोरर खुल्छ। यो कसरी हामी किन्डल मा भण्डारण गरिएका किताबहरु देखा पर्छन् र ठाउँ जहाँ नयाँहरु लाई सही ढाँचामा उनीहरुलाई रूपान्तरण पछि भण्डारण गरिनेछ।
यदि त्यो यस तरीकाले गर्दैन, यो हो कि हामी एक जडान समस्या को सामना गर्दैछौं। यहाँ तपाइँसँग छ यसलाई ठीक गर्न6तरिका:
फरक USB पोर्ट कोसिस गर्नुहोस्
पीसी Kindle पहिचान गर्दैन। समस्या USB पोर्ट संग हुन सक्छ
त्यति नै सरल। र अझै पनी यो अक्सर काम गर्दछ। त्यो क USB ठीकसँग काम नगर्नु केहि चीज हो जुन अपेक्षाकृत बारम्बार हुन्छ।
तपाइँ कसरी जान्नुहुन्छ यदि यो राम्रो संग काम गरीरहेको छ? एक स्मार्टफोन, एक ट्याब्लेट, आदि: जाँच गर्न को लागी सबै भन्दा सजिलो तरीका यो गर्न को लागी कुनै अन्य उपकरण जडान गर्न को लागी प्रयास गर्न को लागी हो। यदि कम्प्युटरले स्वचालित रूपमा यो नयाँ यन्त्रलाई बन्दरगाह मा पहिचान गर्दछ जसमा हामीले सफलता बिना किन्डल लाई जोड्ने कोशिश गरेका थियौं, हामी यो शासन गर्न सक्छौं कि यो USB पोर्ट संग एक समस्या हो।
यस मामला मा समाधान स्पष्ट छ: तपाइँको किन्डल लाई अन्य USB पोर्टहरुमा प्लग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
कहिलेकाहीँ समस्या जल्न को USB केबल संग हो, बन्दरगाह छैन। यदि केबल टुटेको छ, विन्डोज उपकरण पहिचान गर्दैन। यस स्थिति मा तपाइँ अन्य जडान केबलहरु को उपयोग गर्न को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
स्थापना रद्द गर्नुहोस् र USB नियन्त्रण पुन: स्थापना गर्नुहोस्
अनइन्स्टल र पुन: स्थापना USB नियन्त्रण Kindle पहिचान छैन ठीक गर्न।
USB मुद्दा छोडेर बिना, त्यहाँ अर्को विकल्प छ कि हाम्रो पीसी र हाम्रो Kindle को बीच जडान को कमी को मुद्दा को समाधान गर्न को लागी प्रयास गर्न लायक छ। विचार को समावेश गर्दछ स्थापना रद्द गर्नुहोस् र त्यसपछि USB ड्राइभर पुन: स्थापना गर्नुहोस्। यो गर्न को लागी सबै भन्दा सजिलो तरीका हो:
हामी प्रेस विन्डोज + आर कुञ्जीहरु र, स्क्रिनमा देखाइएको कार्यान्वयन विन्डोमा, हामी आदेश लेख्दछौं devmgmt.msc। त्यसपछि हामी थिच्नुहोस् प्रविष्ट गर्नुहोस्।
त्यसपछि, उपकरण प्रबन्धक मा, हामी को विकल्प मा जानुहोस् "युनिभर्सल सीरियल बस नियन्त्रक"।
दायाँ माउस बटन संग हामी सूची मा उपकरणहरु मध्ये एक मा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि मा क्लिक गर्नुहोस् "स्थापना रद्द गर्नुहोस्"। हामी सूची मा उपकरणहरु को प्रत्येक संग एउटै अपरेशन दोहोर्याउँछौं.
एक पटक यो सकिएपछि, हामी उपकरण पुनः सुरु। यो संग जडान समस्या हल गर्नुपर्छ।
USB चुनिंदा निलम्बन अक्षम गर्नुहोस्
अझै पनी USB को साथ मा। धेरै प्रयोगकर्ताहरु यो विधि धेरै उपयोगी पाएका छन्: USB चुनिंदा निलम्बन समारोह असक्षम, एउटै एक कि कन्ट्रोलर अन्य पोर्ट को प्रभावित बिना एक व्यक्तिगत पोर्ट निलम्बन गर्न अनुमति दिन्छ।
नोटबुक कम्प्यूटर मा यो सुविधा पूर्वनिर्धारित द्वारा सक्षम छ। कारण: यो अधिक ऊर्जा बचत प्राप्त गर्दछ र ब्याट्री लामो समय सम्म मद्दत गर्दछ। धेरै सुविधाजनक, यद्यपि फिर्ता मा त्यहाँ विन्डोज र हाम्रो जलाने को बीच कनेक्शन समस्याहरु हुन सक्छ।
कसरी USB छनौट निलम्बन अक्षम छ? निम्नानुसार:
सुरु गर्न, हामी थिच्नुहोस् विन्डोज + आर हाम्रो कम्प्यूटर मा रन आवेदन चलाउन।
त्यहाँ हामी लेख्छौं "नियन्त्रण प्यानेल" र क्लिक गर्नुहोस् प्रविष्ट गर्नुहोस्।
अर्को मेनुमा हामी चयन गर्दछौं "हार्डवेयर र ध्वनि" र त्यहाँ हामी क्लिक गर्छौं "ऊर्जा विकल्पहरू"।
अर्को, एक नयाँ विन्डो खुल्छ जसमा सबै बिजुली योजनाहरु छन् कि हाम्रो कम्प्यूटर प्रदर्शित गरीएको छ। तपाइँले मात्र गर्नु पर्छ तपाइँ एक प्रयोग गरीरहनुभएको छ र क्लिक गर्नुहोस् "योजना सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुहोस्।"
फेरि क्लिक गरे पछि "उन्नत पावर सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुहोस्", हामी खोज्छौं «USB कन्फिगरेसन विकल्पहरूको सूचीमा।
अन्तमा, त्यहाँ हामी मा क्लिक गर्नुहोस् "USB चयनित निलम्बन सेटिंग्स" र हामी चयन गरेर प्रक्रिया समाप्त "अक्षम" दुबै "ब्याट्री" र "जोडिएको" मा।
अन्तिम चरण हो "परिवर्तनहरू सुरक्षित गर्नुहोस" र बाहिर जानुहोस्।
यदि हामी सही तरिकाले चरणहरु को पालन गरेका छौं, समस्या हाम्रो किन्डल पुन: सुरु गरे पछि हल हुनेछ।
Kindle को पूर्ण रिसेट
एक Kindle मा रिसेट गर्नुहोस्
धेरै मामिलामा, किन्डल ट्याब्लेट वा स्मार्टफोन जस्ता अन्य उपकरणहरु बाट फरक छैन। उनीहरु जस्तै, अमेजन ई-रीडर एक निर्मित रिसेट प्रकार्य छ। प्रसिद्ध रिसेट गर्नुहोस्, मेमोरी मेटाउन र फेरि अपरेटि system सिस्टम पुनः सुरु गर्न सक्षम। यो प्राय सफ्टवेयर समस्याहरुको निवारण को लागी प्रयोग गरीन्छ। उदाहरण को लागी, जब पीसी Kindle पहिचान गर्दैन।
Kindle मा रिसेट कसरी गर्ने? यसलाई पुन: सुरु गर्न र समस्या को समाधान गर्न को लागी, केवल यी सरल चरणहरु को पालन गर्नुहोस्:
सधैं कम्प्यूटर संग जोडिएको उपकरण संग, हामी पावर बटन को बारे मा ४० सेकेन्ड को लागी पकड (वा उपकरण स्वचालित रूपमा रिबुट नभएसम्म)।
यो गरिसकेपछि, किन्डल सामान्यतया पुनः सुरु हुनेछ। यदि यो गर्दैन, हामी पावर बटन थिचेर यो गर्न को लागी हुनेछ।
क्यामेराको रूपमा जडान गर्नुहोस्
पीसी Kindle पहिचान गर्दैन। यसलाई कसरी समाधान गर्ने?
सबैभन्दा स्पष्ट समाधान सधैं सबैभन्दा प्रभावकारी छैन। कहिलेकाहीँ तपाइँ अजीब extravaganza को प्रयास गर्न को लागी छ। धेरै Kindle प्रयोगकर्ताहरु हताश पलहरुमा यस्तो गरीएको छ र एक अप्रत्याशित समाधान संग आउनुभएको छ।
यी मध्ये एक हो तपाइँको कम्प्युटरमा तपाइँको Kindle लाई जडान गर्नुहोस् जस्तै यो एक क्यामेरा थियो, एक ई-पुस्तक पाठक छैन।
यो कसरी भयो? हामी यसलाई चरणबद्ध रूपमा व्याख्या गर्दछौं:
जब हामी पीसी लाई Kindle जोड्छौं, हामी कम्प्युटर स्क्रिन को तल जान्छौं, जस पछिaस्लाइडिंग मेनु.
त्यहाँ तपाइँ पहुँच गर्न को लागी छ "जडान विकल्प" सूचना पट्टी मा। हामी सबै गर्न को लागी विकल्प कन्फिगर छ "क्यामेरा को रूप मा जोड्नुहोस्".
कहिलेकाहीँ यो विकल्प ड्रप-डाउन सूचीमा छैन। यदि त्यसो हो भने, यो यसको लागी हेर्न को लागी आवश्यक हुनेछ "उपकरण कन्फिगरेसन र भण्डारण".
यो अविश्वसनीय लाग्छ कि यो पीसी को समस्या लाई समाधान गर्न सक्दैन कि किन्डल लाई नचिन्ने। तर यो धेरै अवस्थामा काम गर्दछ। त्यसोभए किन यो एक प्रयास नदिनुहोस्?
कम्प्यूटर मा Kindle चालक स्थापना गर्नुहोस्
Windows 10 मा Kindle ड्राइभर स्थापना गर्नुहोस्
यदि हाम्रो पीसी Kindle पहिचान गर्दैन, यो सम्भव छ कि हामी स्थापित गर्न को लागी छ Kindle चालक विन्डोज १०। हामीलाई थाहा छ यदि समस्या को स्रोत छ भने यो स्क्रीन मा देखा पर्नेछ पहेंलो मा एक विस्मयादिबोधक चिन्ह संग एक प्रतिमा। तपाइँ एक MTP वा USB ड्राइभर "उपकरण प्रबन्धक मा पोर्टेबल उपकरणहरु" को तहत एक विस्मयादिबोधक चिह्न संग देख्न सक्नुहुन्छ।
असफलता दुबै हुन सक्छ यसको खराबी को रूप मा यो चालक को अनुपस्थिति। यो दोस्रो मामला मा, यो एक अपडेट स्थापित गर्न को लागी पर्याप्त छ। यी पालन गर्न को लागी चरणहरु छन्:
पहिले हामी खोल्छौं उपकरण प्रबन्धक, हामी कहाँ जान्छौं पोर्टेबल उपकरणहरू। त्यहाँ हामी हाम्रो जलाने वा MTP उपकरण कल्पना हुनेछ
तब हामी Kindle वा MTP उपकरण मा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र को लागी विकल्प छान्नुहोस् "ड्राइभर सफ्टवेयर अपडेट गर्नुहोस्।"
यो मेनु मा, दोस्रो विकल्प छान्नुहोस्, जसलाई भनिन्छ "ड्राइभर सफ्टवेयर को लागी मेरो कम्प्यूटर ब्राउज गर्नुहोस्।"
त्यहाँ हामी अन्तिम विकल्पमा जान्छौं, जसले हामीलाई एक लामो बीच छनौट गर्न अनुमति दिनेछ उपकरण चालक सूची हाम्रो कम्प्युटर को लागी। तपाइँ मिल्दो हार्डवेयर र सही मोडेलमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि हामी छान्नुहोस् "MTP USB उपकरण" र हामी क्लिक गर्दछौं "अर्को".
अन्तमा, चेतावनी विन्डोमा "चालक अपडेट गर्नुहोस्", हामी क्लिक गर्दछौं "हो"। यस पछि, विन्डोज हाम्रो किन्डल को लागी उपयुक्त उपकरण ड्राइभर स्थापना हुनेछ।
यी6विधिहरु को अतिरिक्त, त्यहाँ छन् अन्य विचारहरु कि हाम्रो जलाने र हाम्रो कम्प्यूटर को बीच कनेक्शन त्रुटिहरु लाई हल गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। ती मध्ये केहि उदाहरण को लागी हो अर्को पीसी मा जडान गर्नुहोस् वा ई-पाठक को ब्याट्री पुरा तरिकाले चार्ज भएको पछि जडान गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस्।
अन्य समाधान, जलाने प्रयोगकर्ताहरु बाट रिपोर्ट अनुसार, छन् क्यालिबर कार्यक्रम प्रयोग गर्नुहोस् जडान गर्न वा एन्ड्रोइड डिबग ब्रिज (ADB) सक्षम गर्नुहोस् हाम्रो टोली मा। केहि हजार र एक पठन को आनन्द लिनुहोस् कि यो शानदार ई-पुस्तक पाठकले हामीलाई प्रदान गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » इन्टरनेट » मेरो पीसी किन्डल पहिचान गर्दैन: समाधान पत्ता लगाउनुहोस्
कसरी Tiscali ईमेल पढ्न